Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa maamulada galmudug iyo puntland ugu baqay dhamestirka hashiisyadii lagalay – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid ayaa kula dardaarmay hoggaanka labada dhinac in ay hormuud u noqdaan soo celinta nabadda deegaanka iyo dhameynta khilaafaadka dadka ku dhaqan degmada Gaalkacyo ee labada Maamul.
“Dadka ku dhaqan Gaalkacyo waa dad walaalo ah oo weligoodba wada deganaa, hal meelna wax ku wada qeybsan jiray, waxaana loo baahan yahay in la soo celiyo walaalnimadii, iskaashigii iyo wax wada qabsigii aad caanka ku aheydeen” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo dhanka kale xusay in dawladda Federaalku ay mar walba taageereyso sidii loo gaarsiin lahaa dib u heshiisiin dadka oo dhan.
Madaxeynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka dhabeynta heshiiska Gaalkacyo ee ay saxiixeen.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu dhamaaday waqtigii dagaalka, waxa loo baahan yahay ay tahay in dadku nabad ay helaan dibna, ugu soo noqdaan guryahooda, isagoo labada Maamul kula dar-daarmay in ay mar walba xoojiyaan iskaashigooda.
“Waxa kaliya ee aan doonayno waa xaaladda oo dagta iyo dadka oo nabad ku wada noolaada. Waqtigii dagaalka waa uu dhammaaday. Geesi waxaa ah ninkii nabadda qaata, maanta Waxaan arkaysaan in aan ka soo quraacanay Koonfurta Gaalkacyo ee Galmudug, hadana ka qadaynayno dhinaca Puntland, waana taa midda aan halkan u nimid ee ah dadku in ay is dhex galaan, nabadduna hirgasho”.
Labada dhinac ayaa maanta oo Axad la filayaa inay dhameystiraan kala qaadista Ciidamada iyo sidii dadkii barakacay dib loogu soo celin lahaa, waxaana howsha nabadeynta sii wadaya guddi labada dhinac ah oo ka wada hadlaya waxyaabihii dhacay.